Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Thorgan Hazard ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Manuel Akanji ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပေါ်တူဂီဘောလုံးကစားသမား Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဧပြီလ 15, 2020
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်;'' Little ကမက်ဆီ ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက် Bernardo ဆေးလ်ဗားရဲ့အဆင့်မြင့်ကစားကွက်ဖန်တီးရှင်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောအစေးအပြင်ဘက်တွင်သူ၏အသက်တာစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲစတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Bernardo Mota Veiga က de Carvalho အီးဆေးလ်ဗားအတွက် 10, သြဂုတ်လ 1994th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် လစ္စဘွန်း, ပေါ်တူဂီ Mota Veiga ဆေးလ်ဗား (ဖခင်) နှင့်မာရီယာဇွာဆေးလ်ဗား (မိခင်) ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သူဘင်ဖီကာ supporting ကြီးပြင်းလာတယ်။ သူကမြင့်မားတဲ့အိုင်ကျူနှင့်အတူတောက်ပနုပျိုအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏သဘောထားကိုနဲ့ Hard အလုပ်သူဘောလုံးလောကမှာရှိတဲ့ယနေ့အဘယ်မှာရှိများအတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။
သူကတစ်ဦးအသက်ရှစ်နှစ်အဖြစ်သူ၏ဘောလုံးကစားသမားဘစတင်ခဲ့သူ 2013 အတွက်ပေါ်တူဂီဘောလုံး၏ဒုတိယဆင့်အတွက်ဘင်ဖီကာ B ကသူ့ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းမတိုင်မီနောက်ဆုံးမှာလူငယ်စနစ်ကတဆင့်တိုးတက်။ Bernardo '' နာမည်ပြောင်ခဲ့သည်Messizinho '' နှင့် '' Little ကမက်ဆီ '' မိမိအကြီးမားအခွက်တဆယ်ကြောင့်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Jorge Mende သည်သူ၏အေးဂျင့်ဖြစ်ပါတယ်
Bernardo Jorge Paulo Agostinho Mende renouned ဟာတကမ္ဘာလုံးမှတစ်လိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ Mende clients များအပါအဝင်အတူကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးဘောလုံးအေးဂျင့်များအကြားဖြစ်ပါသည် စီရော်နယ်ဒို, ဒါဝိဒ်က de Gea, ဒီယေဂိုကော်စတာ, ဂျိမ်း Rodriguez, မားကို့စ Rojo နှင့် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို။ သူကမကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် "စူပါအေးဂျင့်".
သူအမည်ရှိထားပြီး တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံးအေးဂျင့် 2010 ထံမှ 2015 ရန်ကမ္ဘာလုံးဘောလုံးဆုခြောက်လဆက်တိုက်ကြိမ်မှာ။ Mende တစ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်စတင်ခဲ့ပေမယ့်သူသည်မိမိအစောပိုင်း 20s အတွက်အခါပေါ်တူဂီကလပ်တစ်ခုအရေအတွက်အားဖြင့်ပယ်ချခံရပြီးနောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်စွန့်လွှတ်ခိုင်းခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူတစ်ဦးကဗီဒီယိုငှားရမ်းစတိုးဆိုင်သို့ပွေးလေ၏တစ် DJ သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် Caminha, ပေါ်တူဂီ၏အနောက်မြောက်တစ်မြို့နယ်မှတစ်ဘားနဲ့နိုက်ကလပ်ဖွင့်လှစ်။
မိမိအဖောက်သည်တစ်ဦးအဖြစ်မန်နေဂျာဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုသူ - လူအတော်များများသူ '' စူပါအေးဂျင့် '' Jorge Mende အတူလင့်များကြောင့်, မိုနာကို left အခါကစားကွက်ဖန်တီးရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် join မယ်လို့ယုံကြည်သည်။ ဂွာဒီယိုလာချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်တိုက်ပွဲဖြစ်၏ပထမဆုံးခြေထောက်တွင်မိုနာကိုရဲ့ 5-3 အရှုံးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုအထင်ကြီးသူတစ်ဦးအဘို့စစ်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်လက်ဝဲကျော်ပြီးတာနဲ့
ဘင်ဖီကာ၏ Jorge ယရှေုကမိမိကလပ်မှာကြီးသောအမှုတို့ကိုအောင်မြင်။ သို့သော်ယနေ့တိုင်အဆိုပါကလပ်ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေ Bernardo ဆေးလ်ဗားမလွှဲမရှောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးသာဓကအဖြစ်ကိုးကားအတူပြည်တွင်းဖြစ်အခွက်၌ယုံကြည်ခြင်းသူ၏မရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
သူဟာငယ်ရွယ်ကစားကွက်ဖန်တီးရှင် tn ယုံကြည်သည်ဘူး။ တစ်ရာသီအဘို့, Jorge သညျယရှေု Bernardo ဘင်ဖီကာရဲ့ပထမဦးဆုံးအသင်းများအတွက်သုံးပွဲကျော်ရုံ 31 မိနစ်ကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ Bernardo ဆေးလ်ဗားသည်ကိုယ်တော်တိုင်မကြာသေးမီကသညျယရှေုအောက်မှာသူရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် '' ဘင်ဖီကာရဲ့အကြီးတန်းဘက်နှိမ်နင်းမရှိမျှော်လင့်ချက် ''ဟု ဆို. : "Jorge ဘင်ဖီကာမှာလက်ဝဲ-နောက်ကျောမှာလေ့ကျင့်ကြှနျုပျကိုသှငျးထားသညျ့အခါငါကလပ်မှာအဘယ်သူမျှမအနာဂတ်ခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ "
ဘင်ဖီကာ Bernardo သူ၏စိတ်နှလုံးမှချစ်လှစွာသောကျင်းပမယ့်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်သူ၏နှလုံးဒီတော့ချစ်လှစွာသော '' အီး Pluribus Unum '' သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပေါ်တက်တူး။ သူတို့နှင့်အတူသူ့အိပ်မက် Jorge သညျယရှေုအားဖြင့်ချိုးဖဲ့ခဲ့သည်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလားတူအမည်များ, Player ကို၏အလားတူအမျိုးအစား, ကောင်းမွန်သောသူငယ်ချင်းများ
အဆိုပါကစားကွက်ဖန်တီးရှင်သူ teamsheet ပေါ်တွင်သာဆေးလ်ဗားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ woun't ကြောင်းစီးတီးမှာမိမိရောက်ရှိအပေါ်သို့လေ့လာသည်။ နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အစေးအပေါ်အလားတူအမည်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စရိုက်များကိုမျှဝေကိုသတိပွုမိအပေါ်သို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးသည် pass, ဆွဲငင်အားတစ်ခုအနိမ့်စင်တာနှင့်အတိုက်အခံကာကွယ်ရေးသရဲခြောက်တယ်လို့ပါပြီတဲ့ dribbling စွမ်းရည်များအတွက်မျက်စိယဉ်ကျေးမှုလက်ဝဲခြေရှိသည်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အိပ်ချင်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးစရိုက်များ
Bernardo ဆေးလ်ဗားမျက်စိနှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းအချိန်သုံးစွဲတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တစ်နာရီခန့်အဘို့ပိတ်လိုက်တယ်။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အစေးအပေါ်သူ၏ထောက်လှမ်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကသူ့ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအသိဉာဏ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။ မိမိအထောက်လှမ်းရေးလည်းသတင်းစာဆရာများကသူ့စဉ်းစားဟန်နှင့်ကောင်းစွာ-ကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားသူ၏အပေါင်းအဘော်မြို့အဖွဲ့သည်အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်တစ်ခုတိုင်းပြည်သစ်ဘာသာစကားနှင့်အသစ်သောယဉ်ကျေးမှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ သူဟာဘောလုံးရွှေ့ပြောင်းဖို့အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းနှစ်အရွယ်တွင်ပြင်သစ်မှာအမြန်ဖြေရှင်းမှသာသူ့ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးခဲ့သည်။
သူကအင်္ဂလန်မှလာမယ့်အိပ်မက်မက်မရောက်မီကံကောင်းတာကသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ယူခဲ့တယ်။ "Bernardo အသိဉာဏ်သည်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်မိမိအအိပ်ချင်သဘောသဘာဝသူ့ကိုအရှင်သည်သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စဉ်းစားနဲ့နိုင်စွမ်းပေးသည်နေရောင်ကိုထွန်းလင်းစဉ်မြက်ပင် Make"။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်နှစ်တာ 1-2016 ရာသီ၏လိဂ် 2017 Player ကို
တစ်နှစ်တာလီဂူး 1 Player ကိုခေါင်းစဉ်တက်ခူး, ဒါပေမယ့်မိုနာကို, သူတို့ရဲ့မဲဖွယ်ရှိအုပ်စုခွဲဤမျှလောက်များစွာသောကြယ်များခဲ့ဖူးကြောင်းပေးထားသူကို Edinson ကာဗာနီ, ဆန့်ကျင်အဖြစ်ကဆေးလ်ဗားပါပြီသငျ့သညျ။ ဒီကနေတစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြစ်ပါသည် ရည်မှန်းချက်.
Fabinho ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 အတွက်ဝန်ခံသူ့ယခင်အသင်း-အိမ်ထောင်ဖက်: "သူကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့၏အရေးအပါဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဖယ်လ်ကာအိုနှင့် Kylian Mbappe နဲ့တူသားကောင်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်, သူ့အလှူငွေကိုအလွယ်တကူသတိမမူနိုငျသညျ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတုန်လှုပ်စေသောနံပါတ်များနှင့်အတူကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူသည် swagger, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သို့မဟုတ်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Mendy သို့မဟုတ် Tiemoue Bakayoko များ၏အကြိုက်၏တန်ခိုးမပေးပါဘူး။ ငါ 2014 အတွက်မိုနာကိုရောက်လာတဲ့အခါ, ကိုယ်ကဤကဲ့သို့သောသွားခဲ့သည်မသိခဲ့ပါ။ အမှန်မှာသူကပြင်သစ်တွင်အမည်မသိအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ငါသူတို့ဘင်ဖီကာရဲ့အကြီးတန်းကစားသမားတွေနဲ့တစ်ဦးတည်းသာယှဉ်ပြိုင်ကစားပြီးနောက်သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ suprised ခဲ့သည်။ ယနေ့သူသည်အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Bernardo ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူ Jardim ဖို့ထာဝစဉ်သည်ကြီး
Bernardo ဆေးလ်ဗားသူအများကြီးကြွေးတင်နေသည်ဟုဝန်ခံထားပြီး လီယိုနာဒို Jardim သူကိုပိုပြီးဟောင်းတစ်ဦးနည်းပြထက်သူ့ကိုမှဖခင်တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏။
သူ၏စကားမှာတော့... "ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, Jardim, ငါ့ကိုအများကြီးအားပေးတော်မူပြီ" Bernardo ဆေးလ်ဗားအတည်ပြု။ "သူကငယ်ရွယ်ကစားသမားနှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ သူကကျွန်မငယ်စဉ်မြင်ငါ့ကို opportunitie အပ်ပေးတော်မူ၏။ ငါ့ဦးခေါင်း၌ငါကွဲပြားခြားနားသောခံစားရတယ်။ ငါပြင်သစ်ကလပ်ပူးပေါင်း့3လအတွင်းတိုးတက်ပါတယ်။ "
Jadim သူပထမဦးဆုံးသူ့ကိုအရေအတွက်ကို 10 ရှပ်အင်္ကျီကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ပြီးနောက်သူ့ကိုကလပ်အတွက်ရိုးရာအရေအတွက်ကို 15 ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူကိုသိပ်ချစ်တော်မူ၏။ သူကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dribbling ကျွမ်းကျင်မှုကသူ့ချိုမြိန်လက်ဝဲခြေမလေးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ Bernardo 132 / 1 အတွက်လီဂူး 2016 ခေါင်းစဉ်ဖို့ကလပ်ကူညီပေးနေ, မိုနာကိုများအတွက် 17 ပွဲလုပ်လေ၏။
က Man City, ဘောလုံးဒိုင်ယာရီ
Florentino Luis ကလေးဘဝပုံပြင် Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Raphael Guerreiro ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Gedson Fernandes ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Ricardo Pereira ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Rafa ဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိုအာ Cancelo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိုအာဖေလဇ်မင်းကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နယ်လ်ဆင် Semedo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အန်ဒ Gomes ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Diogo Jota ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 28, 2020
Helder ကော့စကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အန်ဒဆေးလ်ဗားကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်